Inkcazo kunye nemizekelo yoPhando
Uphando luqokelela nokuhlaziywa kolwazi malunga nesifundo esithile. Injongo ebalulekileyo yophando ukuphendula imibuzo nokuvelisa ulwazi olutsha.
Iindlela eziphangaleleyo zophando ziyabonakala ngokuqhelekileyo, nangona ezi ndlela ezahlukeneyo zingase zenzeke. Ngokucacileyo, uphando oluninzi lubandakanya ukuqokelela kunye nokuhlalutya kwedatha, ngelixa uphando olululo luquka "ukusetyenziswa kokufundiswa kunye nokuqokelelwa kwezixhobo ezahlukeneyo," ezinokubandakanya "ukufundwa kwetyala, amava, ukuzibandakanya, ibali lobomi, udliwano-ndlebe , [kunye] neetekisi zenkcubeko kunye nemveliso "( I-SAGE Handbook yoPhando olulungileyo , 2005).
Ekugqibeleni, uphando oluxubekileyo (ngezinye izihlandlo olubizwa ngokuba yi- triangulation ) luchazwe njengento yokubandakanywa kwezicwangciso ezahlukeneyo zokulinganisa kunye nokulinganisela kwiprojekthi enye.
Kukho ezinye iindlela zokuhlela iindlela ezahlukeneyo zophando kunye neendlela. Ngokomzekelo, uprofesa wenzululwazi uRussell Schutt uthi " [ uphando ] oluthile luqala ngophando, uphando luyaqala ngedatha kodwa luphela ngophando , kwaye uphando oluchazayo luqala ngeenkcukacha kwaye luphelela nge-generalization" ( Ukuphanda iNtshona YezeNtlalo , 2012).
Ngamazwi kaprofesa wezekhnoloji uWein Weiten, "Akukho ndlela yocwaningo olulungileyo kuzo zonke iinjongo kunye neemeko. Ininzi yobulumko kuphando lubandakanya ukukhetha nokucwangcisa indlela kumbuzo okhoyo" ( Psychology: Izihloko kunye noNguquko , 2014).
IiNkonzo zoPhando zeKholeji
Izabelo zophando zaseKholeji yithuba lokuba ube negalelo ekuphandeni kwengqondo okanye kwingxoxo .
Uninzi lwezabelo zekholeji zicela ukuba ube nombuzo ofanele ukuhlolisisa, ukufunda ngokubanzi ekufuneni iimpendulo ezinokwenzeka, ukutolika oko ufundayo, ukufumana izigqibo ezicingileyo kunye nokuxhasa ezo zigqibo ngokubonisa ubungqina obufanelekileyo kunye nobungqina obufanelekileyo . Izabelo ezinjalo zingabonakala zibuhlungu ekuqaleni, kodwa xa ubeka umbuzo onokukukhathaza kwaye uyifumana njengomcuphi, unomdla wokwenene, ngokukhawuleza uya kufunda ukuba uphando olunokuba luncedo njani.
"Kuyavunywa, le nkqubo ithatha ixesha: ixesha lokuphanda kunye nexesha lokubhala, ukuhlaziywa kwakhona nokubhala iphepha ngendlela yesicetyiswa ngumqeqeshi wakho. Ngaphambi kokuba uqalise iphrojekthi yophando, kufuneka ubeke ishedyuli eyiyo yexesha elide."
(Diana Hacker, I-Bedford Handbook , ngo-6 eBedford / St. Martin, 2002)
I-Talent kufuneka ikhuthazwe ngamaqiniso kunye neengcamango.Cinga uphando, velisa italente yakho. Uphando aluphelelanga nje imfazwe kwi- cliche , yinto ebalulekileyo ekunqobeni ukwesaba kunye nomzala wakhe, ukudandatheka. "
(URobert McKee, Ibali: Isitayela, isakhiwo, iSiqendu, kunye neMigaqo yeSkrini .) UHarperCollins, 1997)
Isakhelo sokwenza uphando
"Ukuqalisa abaphandi kufuneka baqale ngokusebenzisa amanyathelo asixhenxe abhalwe apha ngezantsi. Umendo awunjalo rhoqo, kodwa ezi nyathelo zibonelela ngesakhelo sokwenza uphando ... (Leslie F. Stebbins, Isikhokelo sabafundi boPhando kwi-Age Age . Unlimited, 2006)
Chaza umbuzo wakho wophando
Ukuphuhlisa isicwangciso sophando kwaye ufumane izixhobo
Sebenzisa ubuchule bokusesha obusebenzayo
Funda ngokucokisekileyo, ulungelelanise, kwaye ufune intsingiselo
Ukuqonda inkqubo yokunxibelelana kweengcali kunye nemithombo yamagama
Ukuvavanya ngokubanzi imithombo "
Bhala Oko Uyazi
"Ndibhekisela kulo [ isiqubulo sokubhala] 'Bhala oko uyaziyo,' kwaye iingxaki zivela xa ityhilwa ukuba uthetha ukuba ootitshala bokuqala bebakala kufuneka (kuphela?) Bhala malunga nokuba ngabafundisi bebakala lokuqala, abalobi bebali elifutshane abahlala eBrooklyn kufuneka ubhale malunga nokuba ngumbhali onobuncinane obemi eBrooklyn, njalo njalo.
"Ababhali abaqhelanise nesihloko sabo bavelisa ukwazi, banokuzithemba ngakumbi, ngenxa yoko, iziphumo ezinamandla.
"Kodwa loo myalelo awufezekanga, oku kuthetha ukuba, njengoko kunjalo, ukuba imveliso ebhaliweyo kufuneka iphelelwe ngumnqweno womntu .Abanye abantu abaziveki benomdla ngomxholo othile, onokuzisola kodwa akufanele umthumelele Ngenhlanhla, le ngqungquthela ine-clause yokuphepha: unokwenene ukwazi ukufumana ulwazi. Kwi-journalism, oku kubizwa ngokuba 'ukubika,' kunye nokungafihli , ' uphando .' [T] uluvo lokuba uphando ngalo mbandela uze ukwazi ukubhala ngawo ngokuzithemba ngokupheleleyo kunye negunya.Ukuba ingcali ye-serial iyona nto yezinto ezipholileyo malunga nenkampani ebhaliweyo: Ufunda 'em uhambe' em. "
(Ben Yagoda, "Ngaba Sifanele Sibhale Oko Siyazi?" I-New York Times , ngoJulayi 22, 2013)
Icandelo loPhando loLwazi
"Ukupheka i-raccoon efile ayiphandi." (Bart Simpson, The Simpsons )
"'I-Google' ayikho igama elifanayo ' lophando .'" (Dan Brown, The Systol Lost , 2009)
"Ndiyifumene ukuba inxalenye enkulu yenkcazelo endiyifumanayo ifunyenwe ngokujonga into ethile kwaye ndifumana enye into endleleni." (UFranklin Pierce Adams, ocatshulwe ku- Reader's Digest , ngo-Oktobha 1960)
Ngaba Ulwimi Lweelwimi?
Inkcazo kunye neMimiselo yeSivumelwano-Isivumelwano seVesi
"Amadoda alishumi elinesibini" - Udlala nguReginald Rose
Iincwadi ezibalulekileyo malunga ne-African American Women
Ngaba Ufanele Uqeqeshe Xa Ukhulelwe?
I-SPDF i-Orbitals ne-Angular Momentum Inani le-Quantum
Iimpawu Zokomoya NezoPhilisa ZaseJasper Ephuzi
Yiyiphi Inombolo yesiSishwankathelo sesi-5?
5 Izipho Ezikwenza Unyuke NjengoChris Sharma
I-Step-By-Step-Step-Conjugation yeeLwimi eziDlulileyo zeTenzi zesiThili
Iincwadi eziphezulu kwiRamayana
Indlela iMilky Way yakhiwa ngayo
Ukuhlaziywa kwePiano yeDiano | Yamaha 'Piaggero' NP-30
I-Florida Salvage Imithetho Yesihloko
I-Martingale Betting System
Imizekelo yeeSitifiketi ezingapheliyo
Nantsi into enokuthi iyenze xa usebenzisa i-Shaft Flex kwi-Clubs yakho
I-Sweetgum Amabhola: iMicrosoft Magic